Amakhethini nabakhiqizi beteyipu abayizimpumputhe | I-Narrowtex
Izihloko zamakhethini ziyindlela yokwenza ngezifiso nezitayela zokuvala amehlo kanye nezingubo zokudweba ukuze ububanzi bendwangu bube banciphise, kudale ububanzi be-pleats noma amafolda.
Iteyipu yesihloko ephelele ingaguqula ukubukeka kwanoma yiliphi ikhethini, ukugoqwa kwesikhumba. I-Narrowtex inikela ngamateyipu anhlobonhlobo wamakhanda amakhethini anobubanzi obuhlukahlukene bokuphakamisa amakhethini noma amakhethini anemiphumela emihle yokuncenga, ukuqoqa, ukuqumba noma ukuqina.
Imikhiqizo ye-Narrowtex Curtain Tape
Amakhethini amaRoma enza ubushelelezi obushelelezi, futhi ahlinzeka ngokubukeka okudala nokwesimanje. I-Narrowtex ikhiqiza amateyipu angama-roman blind agcina iphakethe lenduku nomhlahlandlela wentambo. Iteyipu ine-float eyingqayizivele evumela ukuthi izimpumputhe ezinhle zithwalwe ngemuva kweteyipu. Isihloko esingaboni saseRoma singasetshenziswa futhi njengetheyiphu yokuqoqa amakhethini alula.
Namathisela amateyipu amakhethini amaningi
INarrowtex ikhiqiza uhla lwezihloko ezinwebekayo ukucindezela amateyipu amakhethini amaningi, okuyisihloko esihle sokuhlobisa amakhethini nganoma yiluphi uhlobo lwendwangu. Ncinza izihloko ze-pleat zisebenzisa indwangu ethe xaxa futhi zigcwele kunokuncenga kwepensela. Ukunxenxwa kwempintshi kulungiswe unomphela futhi kuthungelwe isihloko, ngaleyo ndlela kukhombisa ukubukeka okuhle, okwenzelwe okwengeziwe.
I-Narrowtex smock pleat tape inikeza enye indlela ehle kakhulu futhi engajwayelekile kumakhethini we-pencil pleat. Le theyipu idala umphumela ohlukile futhi okhangayo we-smock wokuhlobisa okuhle. Imiphumela emihle itholakala lapho izintambo zidonswa ziqine ngokwanele ukuze izingxoxo zibonakale zimnandi futhi zicacile.
Ikhefi noma ibhokisi liyancenga
INarrowtex ikhiqiza amateyipu esihloko ebhokisini anikeza ukubukeka okuncane kakhulu futhi okuhlelekile. Yaziwa nangokuthi i-café pleat header tape, umphumela wokugcina wokuncenga ugoqeka ungene emaphethweni ajulile phansi kobude obugcwele bamakhethini, okuholele ekuncengweni kahle kwebhokisi. Ukunxenxwa kwamabhokisi kuvimbela ukungena okuncane lapho kucwebezele ngokuphelele.
I-lining tape isetshenziselwa ukunamathisela i-linings kumakhethini. Ulwelwesi luvikela ukulimala kwamakhethini, luhlinzeka ngokuhlukaniswa okukhanyayo nomsindo futhi lunezela ngobuningi ekhethini. Iteyiphu yelining ye-Narrowtex ine-sandwich yesiketi esiphindwe kabili evumela ithephu ukuthi isetshenziswe ngomugqa owodwa wokuthunga ngaphandle kwesidingo sokugoqa phezulu kukalayini. Iteyipu yolwelwesi iyatholakala, ukuvumela ukususwa okuhlukile kokuhlanzwa nokuncishiswa kwendwangu ngeke kuthinte ikhethini.
Amateyiphu we-Narrowtex ajwayelekile aqoqa amakhanda ayisitayela sendabuko kepha engahlelekile evumelana namakhethini anethonsi elifushane, ngokuphelele. Hlanganisa izihloko zingasetshenziswa ngamathrekhi noma izigxobo futhi zibe nohla olulodwa lwamaphakethe wezingwegwe.
INarrowtex ikhiqiza uhla olubanzi lwamateyiphu wepeni amakhethini wepensela, ayizihloko ezilula futhi eziguquguqukayo. Izicelo zepensela zakha imiklamo yendabuko engaphelelwa yisikhathi futhi siyisihloko esijwayelekile semidwebo ephrintiwe, ecacile nenendwangu enkulu. Ukunxenxa ipensela kungaba okuxekethile noma okuqinile futhi ukugcwala kungashintshwa ukuze kukhethwe. Ngenxa yobubanzi obuhlukahlukene bezihloko zamapensela, amadizayini ahlukene wokwakha akhiqiza imiphumela ehlukahlukene yokuthakazelisa.
Iteyiphu ye-Narrowtex buckram isetshenziselwa ukuqinisa phezulu kwekhethini lokuklama izihloko ezincishwe ngesandla. Iteyipu yokuqina kwentloko iqinisa indwangu ngokuqina, ivumela ukwakheka okuncengayo futhi kuzinze kalula ukuze ukuncenga kugcinwe endaweni lapho kuthungiwe.
INarrowtex ikhiqiza uhla lwamakhasethi ahamba phambili aguquguqukayo, aklanyelwe izindwangu zamakhethini abucayi nezintekenteke. Le tepi esobala isetshenziselwa ikakhulukazi ukungeza amandla nokuqina futhi isiza ukusekela izikhalazo, izindandatho zesiqeshana, amathebhu, kanye
ama-grommets. Ukusebenza kwayo kuyefana netheyipu yesihloko ejwayelekile futhi inani lokuhlangana lingashintshwa ngokudonsa izintambo zombili ekugcineni.